» सिजन्स ब्याण्ड’ को अर्को फरक स्वादः को नेपाली यो ?
सिजन्स ब्याण्ड’ को अर्को फरक स्वादः को नेपाली यो ?
२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १८:२६
हेटौंडाका संगीतकर्मीहरुको सांगीतिक समुह ‘सिजन्स ब्याण्ड’ ले नयाँ गिती संग्रह सिजन्स द न्यू बिगिनिङ बाट दोश्रो गितको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । ब्याण्डका गायक सुजिल कर्माचार्यको स्वरमा को नेपाली यो गितको भिडियो ब्याण्ड कै युट्युब च्यानलमार्फत रिलिज गरिएको छ । अहिले यस गितको चर्चा बेग्लै देखिन्छ ।
फरक स्वाद पस्कने यस ब्याण्डको यो कोशिशलाई दर्शकहरुलेरुचाएको पाईएको छ । सिजन्स ब्याण्ड कै शब्द संगीतमा तयार भएको यस गितको भिडियोको निर्देशन बिजेश पौडेलले गरेका छन्। शिवराम श्रेष्ठको छायांकन रहेको भिडियोमा ध्रुब अधिकारी, अबिर पौडेल, प्रकाश खनाल लगायतको अभिनय रहेको छ ।
सिजन्स द न्यू बिगिनिङु संग्रहबाट रिलिज गरिएको पहिलो गित भन्छन् नारायण ले समेत राम्रो प्रतिक्रिया बटुलेको थियो । उक्त गितमासमेत यस ब्याण्डले फरक स्वाद पस्किने कोशिश गरेको थियो जुन सफल हुन पुग्यो । बजार व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको स्टेरियोरेकर्ड्सका अनुसार सिजन्स द न्यू बिगिनिङ संग्रह मार्फत ब्याण्डले सकारात्मक उर्जा दिंदै मनोरंजन प्रदान गर्ने खाल्का गितहरु पस्कनेछन् । सिजन्स ब्याण्डको यस प्रयोगलाई दर्शकले रुचाएको समेत पाईएको छ ।
विगतमा सिजन्स ब्याण्डले सुनेको कुरा, असार साउन, रातो माटो, असफल जिन्दगी, सपना मात्र आदि लोकप्रिय गीतहरु स्रोता तथादर्शकहरुलाई दिइसकेको छ ।
तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नहोला ।